रिपब्लिकाले फेरि स्वीकार्‍यो गल्ती, तर काइते भाषामा ! उखान याद आयो- गर्ने बेला मनपरी, अहिले आएर सरी? – MySansar
रिपब्लिकाले फेरि स्वीकार्‍यो गल्ती, तर काइते भाषामा ! उखान याद आयो- गर्ने बेला मनपरी, अहिले आएर सरी?
Posted on June 12, 2019 June 13, 2019 by Salokya
‘रिपब्लिका’को खुइल्याउने अभियानमा अर्को ‘ब्लन्डर’, गल्ती सच्याउनुको साटो अर्को गल्ती थप्दै’ शीर्षकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिसर्च डिभिजनमा कार्यरत रही हालै अवकाशप्राप्त प्राध्यापक नीलमकुमार शर्माको पेपर स्रोत उद्धृत नगरी चोरी गरिएको विषयमा छापिएको समाचार गलत रहेको प्रमाणसहित माइसंसारमा ब्लग लेखेको तेस्रो दिन आज बल्ल रिपब्लिकाले गल्ती स्वीकार गरेको छ। तर एकदमै काइते भाषाको। मलाई त एउटा उखान याद आयो- गर्ने बेला मनपरी, अहिले आएर सरी?
रिपब्लिकाले अघिल्लो मंगलबार (जुन ४, २०१९ मा) पेज ३ मा TU Research head found plagiarizing शीर्षकमा ६ कोलमको समाचार छापेको थियो। एक अवकाशप्राप्त प्राध्यापकलाई गम्भीर आरोप लगाउँदै।
आज एक हप्ताभन्दा बढी समय पछि सोही पेजमा गल्ती स्वीकार गर्दै काइते भाषामा माफी मागिएको २ कोलममा सूचना यसरी राखिएको छ-
आफू माथि परेको देखाउनका लागि रिपब्लिकाले प्राध्यापक शर्मालाई नै वक्तव्य लेख्न लगाउँदै त्यसको मुनि Editor’s note भन्दै लेखेको छ-
अर्थात् रिपब्लिकाले software used in scanning Sharma’s article was not up to the standard मात्र भनेको छ, आफूले शर्मामाथि लगाएको plagiarizing को आरोप गलत देखियो भनेको छैन। आफ्नो आरोप यस कारणले सही छ भनेर पनि लेखेको छैन।
एउटा प्राध्यापकको मान र प्रतिष्ठामा असर पर्ने गरी छ कोलमको समाचार लेखिसकेपछि ‘यस्तै हो, गल्ती भइहाल्छ। सरी नि त’ भनेको जस्तो काइते भाषा देखियो।
जबकि गल्ती त्यो पाराको पक्कै पनि हैन। सुरुमा पत्रिकामा छापिएकै दिन बिहान रिपब्लिकाको अनलाइनमा राखिएको TU research head found plagiarizing (with documents) शीर्षकको समाचारमा ६ वटा पिडिएफ डकुमेन्ट पनि राखिएका थिए। त्यसमा क्लिक गर्दा देखिन्थ्यो, त्यो नीलमकुमार शर्माको आफ्नै पेपर रहेछ, जसले चोरेको भनिएको थियो। आफ्नै जुन पेपर चोरिएको भनिएको आरोप लागेको छ, त्यो केबाट चोरिएको भन्दा त त्यही पेपरबाट जुन अर्कै ठाउँमा अपलोड छ।
जब माइसंसारले डम्बर चेम्जोङको विषयमा रिपब्लिकाले गल्ती गरेको बारे ब्लग लेख्यो, रिपब्लिकाले त्यो समाचार सुरुमा डिलिट गर्‍यो। त्यसपछि त्यो लिङ्कमा अपडेछ गर्दै एउटा नाइजेरियनको पेपरबाट चोरिएको दावी गरियो।
माइसंसारले उनले नाइजेरियनको हैन, नाइजेरियनले चाहिँ नेपालीको चोरेको हुनसक्ने तथ्य राखेर अर्को ब्लग लेख्यो। पढ्नुस् ‘रिपब्लिका’को खुइल्याउने अभियानमा अर्को ‘ब्लन्डर’, गल्ती सच्याउनुको साटो अर्को गल्ती थप्दै’
त्यसको तीन दिनपछि यो काइते भाषामा गल्ती स्वीकार गरिएको नोट आएको हो। तीन पटक सम्पादन गरिएको त्यो समाचार अहिले यस्तो छ TU research head’s rebuttal
के भन्छन् प्राध्यापक नीलमकुमार शर्मा?
प्राध्यापक शर्मासित मेरो चिनजान केही पनि थिएन। पहिलो पल्ट यही विषयमा कुरा गर्न फोन गरेको थिएँ। उहाँको फोन डम्बर सरबाटै पाएको थिएँ। डम्बर सरसित पनि मेरो पहिलो भेट यही इस्युका कारण भएको हो।
डम्बर सरसित भेट्दा उहाँ निकै आक्रोशित हुनुहुन्थ्यो पूरै पत्रकारहरुबाट। इटहरीका मेयरको प्रसंग बारम्बार निकाल्दै यस्तै अति भएर त गरेको होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो।
निलम सर भने पत्रकारहरुबाट एकदमै डराउनु भएको रहेछ। छोराछोरीहरुले पनि ह्या बुबा चुप बस्नुस्, नेपाल यस्तै देश हो, फेरि के के गर्देलान् भनेकोले चुप बसेको छु भाइ, मैले सत्य कुरो बोलेको खुइल्याउनलाई केही नपाएर यस्तो गरेका हुन् भन्नुहुन्थ्यो।
आज त्यसरी भूल सुधार आउनु अघि हिजो रिपब्लिकाका सम्पादक, रिपोर्टर विष्णु अर्याल अनि डम्बर सर र निलम सरको छलफल भएको रहेछ। ‘मलाई यो केसले बहुत क्षति गर्‍यो सर। गल्ती भयो, अब हुन्न’ भने। ‘मैले पनि यो क्षमा याचना आउँछ आउन्न म हेर्छु। आएन भने म अगाडि जान बाध्य हुनेछु भनेँ’, प्रा. शर्माले सुनाए।
कस्तो काइते भाषामा माफी मागेको त, तपाईँलाई चित्त बुझ्यो? मैले सोधेँ।
उनले जवाफ दिए, ‘के भन्नु र लाचारलाई। मैले गल्ती गरेँ अब मलाई पनि अलिक निकास राखिदिनुस् सर। मलाई यो कामले बहुत नोक्सानी भएको छ भन्न थाल्यो। मलाई पनि संसारले यस्को कुकर्म थाहा पाई हाले, किन बढी निचोर्ने जस्तो लाग्यो।’
‘भो अब विवाद नगरौ जस्तो लाग्यो। फेरि यस्तै उटपट्याङ अर्को केही विवाद ल्याइदेला जस्तो लागेर चित्त बुझाएँ’, उनले भने।
पीडित र पीडक दुवै राजीखुशी भएपछि हामी तमाशेहरुलाई जस्तो लागे पनि के फरक पर्छ र!
पत्रकारकै कारण पत्रकारिता बद्‍नाम नहोस्। म पत्रकार हुँ भनेर चिनाउँदा लाज मान्न नपरोस् भन्ने मात्रै मेरो उद्देश्य थियो। कसैलाई खुइल्याउने मेरो पनि उद्देश्य होइन। पत्रकारितालाई हतियार बनाएर कसैले गलत काम गरिरहेको छ भने यस्तो भइरहेको छ है भनेर आफूले जानेको कुरा देखाउने हो।
यो इस्यु अब यत्तिकैमा टुङ्गिए हुन्थ्यो। फेरि यस्तो गल्ती नभइदिए हुन्थ्यो। सबैको भलो होस्! कल्याण होस्!
2 thoughts on “रिपब्लिकाले फेरि स्वीकार्‍यो गल्ती, तर काइते भाषामा ! उखान याद आयो- गर्ने बेला मनपरी, अहिले आएर सरी?”
Pingback: 11 Years on, Has Nepal’s Republic Succeeded? - JIFFY360.COM